Anyị na-enyocha SanDisk Jikọọ Ikuku Stick, eriri USB maka gam akporo na IOS | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-enyocha SanDisk Jikọọ Ikuku Stick, USB wireless maka gam akporo na IOS
Xavi Carrasco | | Ngwa, Nyocha
Dị ka ọtụtụ n'ime gị maara ma eleghị anya na-ata ahụhụ, enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị nrụpụta na-ahọrọ ịghara itinye ekwentị ha na oghere SD SD, ezigbo nsogbu maka ndị ọrụ na-ejikwa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọtụtụ faịlụ, ma ha vidiyo , foto ma ọ bụ egwu. Na SanDisk jikọọ ikuku Stick, ọ dịghị mgbe ọ bụla mfe mụbaa ikike nke ekwentị anyị.
Ngwaọrụ a nke SanDisk wuru, na-enye anyị ohere ịnwe ụdị ọdịnaya dị iche iche nke ọtụtụ na - enweghị eriri site na ngwa ya dị na gam akporo na iOS. SanDisk bụ ụlọ ọrụ California dị ike nke nwere ọkachamara na ịmepụta Flash nchekwa draịva. Rrụọ ọrụ nke ọma zụta site na Western Digital, onye nrụpụta ụwa draịva ike, na ogologo akụkọ ihe mere eme na ụlọ ọrụ eletrọniki. Sandị SanDisk nke a ma ama n'ihi ogo ngwaahịa ya ga-ejigide aha ya na Western Digital Corporation.
1 Sleek imewe na ihe siri ike ewu
2 Iji SanDisk Jikọọ Ikuku Stick dị mfe
3 SanDisk APP dị mfe ma kensinammuo iji ma rụọ ọrụ bara ezigbo uru.
4 SanDisk Jikọọ Ikuku Stick bụkwa USB flash mbanye
5 Ruo ngwaọrụ atọ ejikọrọ n'otu oge
6 Nnwere onwe nke ngwaọrụ a bụ awa 4.5
7 Dị na nha dịgasị iche iche, 16GB, 32GB, 64GB na 128GB
Sleek imewe na ihe siri ike ewu
Ngwaọrụ wuru en polycarbonate ojii na-egosipụta ịdị mma na ịdị mma, n'ihu ya anyị nwere ike ịhụ atụmatụ nke hexagons na enyemaka nke na -emepụta ụdị cube dabere na etu ọkụ si ada, nkọwa zuru oke nke na-enye ụdị mmadụ ahụ, dịka SanDisk na-agba nkịtị na anyị na akara ngwaahịa ya, dị ka SanDisk Ultra USB. Na ihu a na-egosi a na-acha ọcha na-edu kedu ihe ọ ga-enye anyị nzaghachi banyere kedu ihe ọ bụá na-eme na ngwaọrụ. The na-akpa ọchị nke ihe a na-acha ọcha ada bụ na ọ bụ kpam kpam imperceptible ma ọ bụrụ na Jikọọ Ikuku Stick bụ anya. Anyị hụrụ ya n'akụkụ aka nri ya el bọtịnụ mgbanye, fántutu anya pịa y tụgharịa siri ikentutu anya nke a na-eme site na njehie. Na ala azụ, anyị nwere ike itinye akaghị, iji tinye ya na igodo anyị ma ọ bụ ebe ọ bụla masịrị anyị kacha mma, njirimara oge ochie nke ọtụtụ osisi USB ndị SanDisk chọrọ idobe na mpaghara ikuku ya.
Ọ ga-amasị m ịkpọtụrụ mkpuchi ahụ pụrụ iche, ebe ọ bụ na e wuru ya n'akụkụ abụọ, otu n'ime ha, la mputa, es rọba tuzo nke nnukwu iguzogide na Nke ozo, la ime, ọ bụ zutereáIegha y ihe nchebege na USB ụdị A njikọ. Ọ bụrụ na ida mkpuchi a apụ, ọ ga-abụrịrị n'ihi mmejọ gị, ebe ọ dabara nke ọma na ọ gaghị ekwe omume ka ọ daa.
Ihe na SanDisk jikọọ ikuku Stick nwa 191mm n'obosara, 762mm ogologo y 95mm gbara ọkpụrụkpụ. Ihe kariri ihe eji eme ihe nke anyi nwere ike ichota n'ahia ugbu a, ma na-eche na o gunyere batrị, antenna na onye njikwa Wifi n'okpuru chassis ya, obu ihe kwesiri ekwesi na o gha adighi nma. Iji aka na ibu ibu ị nwere ike ikwu na mmetụta dị mma, na que enwe mmetụta siri ike.
Iji SanDisk Jikọọ Ikuku Stick dị mfe
Isi akụ nke SanDisk Jikọọ Ikuku Stick bụ doro anya na njikọta ikuku ya na iOS na gam akporo dakọtara na APP akọwapụtara, yana dịka anyị kwurula n'elu iji ngwaọrụ dị mfeNaanị anyị ga-pịa bọtịnụ ike n'akụkụ ma site na ọnụ ma ọ bụ mbadamba anyị chọta ma jikọọ na netwọk WiFi nke Ikuku Ikuku na-enye. O doro anya na akwụkwọ akụkọ anyị nwere ike ịgbanwe SSID (aha ntanetị) ma nyefee okwuntughe nke mere na naanị onye anyị chọrọ ijikọ.
SanDisk APP dị mfe ma kensinammuo iji ma rụọ ọrụ bara ezigbo uru.
Ozugbo ejikọtara anyị, anyị nwere ike ịnweta ọdịnaya site na SanDisk APP, nke a bụ kpọmkwem maka njikọ Njikọ Ikuku. PLuckily ọ bụ nnọọ ihe dị mfe ma kensinammuo iji. N'ime ngwa ngwa anyị ga-ahụ atụmatụ dị mfe, dịka ijikọ SanDisk Jikọọ Ikuku Stick na mpaghara WiFi mpaghara, nke ga-eme ka anyị nwee njikọ na ngwaọrụ n'otu oge ahụ anyi efughi la njikọ ka mnternet de anyị W.ifi. Akụkụ ọzọ nke ndị ọrụ na-enye igwefoto igwefoto ha nwere ọtụtụ ihe ọfụma bụ ịme a ndabere nke vuestra onyonyo onyonyo, zuru oke maka ịnyefe ihe oyiyi na kọmputa ma soro ha rụọ ọrụ ma ọ bụ mee nkwado ndabere na mpaghara dị mfe.
SanDisk Jikọọ Ikuku Stick bụkwa USB flash mbanye
Otu isi na ihu ọma bụ na mbanye nke a SanDisk Jikọọ mbanye bụ ka a USB 3.0 pendrive, na nke anyị nwere ike jikọọ ya na kọmputa na bulite faịlụ comfortably ịkpọrọ ha ebe a gaa ebe ọzọ ma ọ bụ iji kporie ndụ site na ama anyị.
Ruo ngwaọrụ atọ ejikọrọ n'otu oge
Nke a bụ ụzọ dị mma iji nweta obere ihe nkesa ịkọrọ niile ụdị faịlụ na mpaghara. Ruo ugbu a, nnukwu ọrụ na njikọ njikọ nke na-enye anyị nnukwu mmụba na nrụpụta ọrụ maka ụwa ọkachamara na nke onwe.
Nnwere onwe nke ngwaọrụ a bụ awa 4.5
N'ime ọnọdụ ya kachasị mma, site na iji otu ngwaọrụ ejikọtara, anyị ga-enwe oge awa 4.5 iji mee ihe na-aga n'ihu, n'ezie nke a abụghị isi ike ya, ma na ọkwa nke obere azụmahịa, nweta faịlụ elekere anọ na ọkara bụ ogologo oge, na na-enye anyị ohere ikiri ihe nkiri niile na-enweghị nchekasị.
Nchaji dịtụ ngwa ngwa na 2 awa anyị nwere unit na 100% na n'ezie anyị nwere ike jikọọ ya na a anya ma ọ bụ a powerbank ịgbatị awa ojiji dị ka anyị chọrọ.
Dị na nha dịgasị iche iche, 16GB, 32GB, 64GB na 128GB
SanDisk Jikọọ Wirless Stick dị na ikike dị iche iche na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya nyere nkọwa ya na ike ya. 16GB maka € 30, 32GB maka € 40, 64GB site 50 € na 128GB maka € 80.
Ezi nhazi na nguzogide
Uru na vasatail
SanDisk Jikọọ wireless Stick
Nyochaa: Xavi Carrasco
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Anyị na-enyocha SanDisk Jikọọ Ikuku Stick, USB wireless maka gam akporo na IOS
5 smartphones nwere obere ihuenyo
Ndị ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-agbakọ ọnụ maka ihu igwe onye ọrụ ha